Mbudzi. Dzimwe nyaya dzekunyora dzemwedzi uno | Zvazvino Zvinyorwa
Mbudzi. Dzimwe nyaya dzekunyora dzemwedzi uno
Mariola Diaz-Cano Arevalo | | Mabhuku, Vechidiki Mabhuku, Novela, Nhema nhema, Romance novel
Starts november uye zvioneke nhau dzekunyora mune panorama yatotarisana neKisimusi isiri kure. Kuzvibatsira, kwazvino, dema, kudanana-erotic, kuyaruka… Kune vaverengi vezvose zvavanofarira. Kune akawanda uye parizvino ndinoaongorora aya 8 mazita yemazita makuru kubva kumafambiro ese ehupenyu.
1 Kubatsira iwe pachako
1.1 Elsa Punset - Anofara
1.2 Silvia Llorens naBeth Comabella - Uri kuenda kunogadzirisa imba yako
1.3 David Summers - Nhasi ndamuka ndichiita remersault
2.1 Salman Rushdie - Kuderera kwaNero Goridhe
2.2 Yanis Varoufakis - Kuzvibata sevakuru
3 Zvinyorwa zvevechidiki
3.1 Anna Todd - Sista
4 Nhema nhema
4.1 Lorenzo Silva - Mhumhi dzakawanda
5 Dzidziso yeerotic-erotic
5.1 Megan Maxwell - Ndiri Eric Zimmerman
Kubatsira iwe pachako
Elsa Punset - Kufara
sero pakutanga kwemwedzi Elsa Punset zita idzva. Chishandiso che kuwana mufaro kuburikidza nehungwaru hwakaunganidzwa mukati memazana emakore uye kutenderera pasirese. Zvazviri tinofamba nemagariro akarasika uye munyori anoita kuti tishamise, semuenzaniso, zvakaitwa nevaGiriki vekare kana vaRoma kuti vanzwe zvirinani.
Iyo inotikokawo kuti tiongorore mabasa akasiyiwa nesu vadetembi vakuru, maartist, masayendisiti nevamwe vazivi zvemazuva edu. Inhaka yatinozvigonawo isu pachedu zvirinani. Uye zvechokwadi funga nezvezvakakosha zvidzidzo zvehupenyu zvatinogona kudzidza nekufamba nyika.
Silvia Llorens uye Beth Comabella - Iwe uri pakupedzisira kuenda kunorongedza imba yako
Kutevera kubva pakubudirira kwaMarie Kondo nemabhuku ake, iri zita rave kubuda zvakare mu nyanzvi musangano rewebhu Rongeka. Mariri vanotipa mirayiridzo inoshanda uye yakajeka yekuronga imba, chinja maitiro uye gadzira matsva maitiro anotibatsira kurarama zuva nezuva nehukuru hupenyu. A kuchinja kwemaonero kudzidza kudzidza kuva kuwedzera kubudirira kumba uye kuraira nzvimbo yega yega kuti iite iwo maratidziro zvakasununguka uye zvinobudirira.
David Summers - Nhasi ndamuka ndichipa rimwe zuva
Kune vateveri vaDavid Summers, mutungamiri, munyori wenziyo uye muimbi weiyo hit pop-rock boka Varume G kubva kuma80. Zhizha rinounza bhuku iri kupi fungisisa pamabatiro awakaita mamiriro ezvinhu awakatarisana nawo ipapo. Uye panguva imwechete kuti ndikwanise kuchengetedza zvakajairika muhupenyu hwake. Kufungisisa nezve kubatana, maitiro ekugadzirisa kubudirira, kuti mukurumbira wakanyanya uye fan fan zvakamubata sei.
Salman Rushdie - Kuderera kwaNero Golden
A kutanga kwemwedzi Runyowani nyowani yaRushdie inobuda, pahriller yazvino yakarongedzwa mune zvematongerwo enyika, zvemagariro, uye zvetsika mamiriro ezuva ranhasi North America. Rushdie anoshandisa zvinyorwa, firimu uye pop tsika kuunza yakasarudzika vatambi, kutanga nevechidiki vanoshuvira firimu director anozviona achipinda mune zvakasviba zvemhuri yeGoridhe, azere nezvakavanzika uye akatongerwa njodzi. Kuderera kwetateguru wayo, Nero Golden, kuri pachena kuratidzwa kwekuuya kwaDonald Trump kusimba uye shanduko dzakadzama munharaunda yeAmerica.
Yanis Varoufakis - Kuzvibata sevanhu vakuru
Yakabudiswa pakupera kwemwedzi uye inooneswa seye nhoroondo huru yedambudziko reEurope. Uye hapana chinhu chiri nani pane kuudzwa mumunhu wekutanga nemumwe wevanozivikanwa kwazvo protagonists. Yanis Varoufakis aive gurukota rezvemari muhurumende yeGreek yeSyiriza (iro reruboshwe bato), uye mune ino nhoroondo anoratidza yake tarenda semutauri wenyaya uye inorondedzera kusangana kwake uye kusawirirana nevanopokana veEuropean padambudziko iri. Inoratidza zvakare iyo kushanda kwemasangano eEuropean nemasimba ake ekutaurirana, uye pakupedzisira kuzvipira kwechiGreek kunoitika mushure mekubva kwake kuhurumende.
Uyewo pakupera kwemwedzi, musi wa28, Iyo nyowani nyowani yaAnna Todd yakaburitswa, munyori weWattpad chikuva uyo akasimuka mukurumbira neicho chiitiko che pashure. Kune vaverengi kubva pamakore matanhatu. Uye kekutanga ichave kuratidzwa kwepasirese nekuburitswa panguva imwe chete munyika dzinoverengeka, kusanganisira Spain, ichatambirwa naTodd.
Sisters inotaurira nyaya yehanzvadzi ina, Bheti, Meg, Amy naJo Chitubu, iyo, kunyangwe ivo vakasiyana kwazvo kubva kune mumwe nemumwe, pamwe chete vanogona kubata zvese.
Lorenzo Silva - Mhumhi dzakawanda
Para kupera kwemwedzi ino nyowani nyowani inoburitswa kwavanodzoka Bevilacqua uye Chamorro pamwe nekuferefetwa kwezviitiko zvina, mhosva ina dzinotyisa dzine chinhu chimwe chakafanana: vanyajambwa vese vasikana kana vari kuyaruka. Imwe neimwe yadzo inoratidza njodzi idzo vana vedu nevechidiki varatidzwa zuva rega rega: kubva pamhando nyowani dzekutaurirana kuburikidza nehukama hwemagariro, kudheerera kana kuwedzera kwechisimba chechikadzi pakati pevechidiki vakaroorana.
Megan Maxwell - Ndiri eric zimmerman
Buda zvino pakutanga kwemwedzi vhoriyamu yekutanga yekufona iyi spin-off de Ndibvunze chero chaunoda, saga inotyisa uye ine mukurumbira erotic yaMegan Maxwell, mambokadzi mambokadzi weiyo genre.
Eric zimmerman muzvinabhizimusi ane simba weGerman anozvitsanangura semurume kutonhora uye kusava neunhu, uyo anofarira iyo bonde pasina rudo kana kuzvipira. Pane imwe yenzendo dzake kuSpain kunoshanyira mumwe wevatumwa vayo anosangana nemukadzi wechidiki anonzi Judith Flores Zvinomukwevera munzira yaakange asina kujaira. Pandinoona kuti ane aya manzwiro asina kujairika, anofamba achibva kwaari, asi kwenguva pfupi.
Vanobva vatanga a hukama hwakazara nekufungidzira uye eroticism, umo Zimmerman anonakidzwa nekudzidzisa Judith kunakidzwa nebonde nenzira yaakange asina kumbofungidzira.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Type » Novela » Mbudzi. Dzimwe nyaya dzekunyora dzemwedzi uno
Mbudzi protagonist yemabhuku. Mamwe mazita akakumikidzwa mwedzi uno